Ii-FAQs - iShanghai Gokai Industry Co., Ltd.
Singumvelisi oqeqeshiweyo oneminyaka eli-12 sikule ndawo.Sidityanisiwe nomzi mveliso kunye nomrhwebi
Athini amagama akho okuhambisa?
I-EXW, i-FOB, i-CFR, i-CIF, i-DDU, i-DDP (ngokwesicelo sabathengi)
Yintoni imiqathango yakho yentlawulo?
T / T, L / C kwimbono, i-Paypal, i-Western Union
Ithini imali yakho?
Malunga ne-10-30days, kuxhomekeke kwishedyuli yethu yemveliso kunye neenkcukacha zakho
Ngaba unaye umhloli wokuhlola?
Ewe sinaye umhloli. Bebehlala kumzi-mveliso kwaye bejonga ukusuka kwinto ukuya kwimpahla, sijonga kwaye sithathe iifoto ngalo lonke ixesha lokuvelisa
Ngaba unika iisampulu, simahla okanye songeziwe?
Iisampulu zisimahla, kodwa umthwalo kufuneka uhlawulwe ecaleni kwakho.
Ndingalifumana njani elona xabiso lililo?
Nceda unikezele ngeenkcukacha zemveliso malunga neemfuno zakho ukuze ndikwazi ukukunika esona sibonelelo silungileyo ngexesha lokuqala. Naluphi na uyilo kunye neemfuno ezingaphezulu zinokuhanjiswa kamva kwi-WhatsApp, WeChat, Skype, Imeyile kunye nezinye iindlela. Qinisekisa ixabiso.
I-MOQ yitoni enye. Ubukhulu ezahlukeneyo kunye moq ezahlukeneyo.
Ngaba utyelelo kumzi-mveliso okanye uhlolo lwamkelekile?
Ewe, ukutyelelwa ngumzi-mveliso kuhlala kwamkelekile kwaye kuhlolwa njengokuhlolwa komntu wesithathu kulungile.
Yimalini enokulayishwa kwisitya esipheleleyo?
Isikhongozelo se-20ft, kunye nepallet, umthwalo malunga neetoni ezingama-16-21, ngaphandle kwepallet, umthwalo malunga neetoni ezingama-20-24 40ft isikhongozeli, umthwalo malunga neetoni ezingama-26.
Yintoni inkqubo yomyalelo?
Thumela isicelo sakho esineenkcukacha → Uyilo lwakho → Qinisekisa ikowuteshini kwaye wenze intlawulo → Uvavanyo lomngundo → Ukwenza iisampulu → Uvavanyo lweesampulu (Ukuvunywa) → Ukuveliswa kobuninzi → Ukutshekishwa kobungakanani → Ukupakisha → Ukuhanjiswa → Emva kwenkonzo → Phinda i-odolo ...
Yeyiphi indlela yokuhambisa?
Ingaba yi-Ocean Shipping, i-Airlift kunye ne-Express (EMS, i-UPS, i-DHL, i-TNT kunye ne-FEDEX). Ke ngaphambi kokubeka iodolo, nceda unxibelelane nathi ukuze uqinisekise indlela oyikhethileyo yokuhambisa.
Ngaba ukho nawuphi na umboniso?
Ewe sihlala sisiya kwimiboniso eseShanghai kabini ngonyaka (enye ngo-Matshi enye ngoSeptemba). Kwaye saya e-SGI Dubai, e-Fespa Yurophu, njlnjl. Kwixesha elizayo siza kongeza i-China yokuThumela kunye nokuThumela ngaphandle i-Fair (i-Canton Fair) kuluhlu lwethu lwemiboniso, kunye nezinye iziboniso zamanye amazwe eziza kubanjwa kumazwe ahlukeneyo.
Njani ngenkonzo yasemva kwentengiso?
Ukuba kukho naziphi na iingxaki ezisemgangathweni xa ufumana iimveliso zethu, sibonise iifoto kwaye emva kokuxoxa siza kuba nakho ukulahleka kula maxesha alandelayo.